Laxer OS, Arch Linux miaraka amin'i Gnome izay tsy mitaky loharano sy endrika tsara tarehy | Avy amin'ny Linux
Raha mitady hanandrana ny Arch Linux ianao Pero tsy mila mandalo ny fizotranao Ho an'ireo vao tonga amin'ny Linux dia mety ho sarotra izany na aleonao fotsiny manangona fotoana kely ao anatin'io dingana io, avelao aho hiteny aminao fa rehefa nitety Internet aho dia nahita ny fanambarana ny fananganana fizarana Linux vaovao nahasarika ny saiko.
Laxer OS no fizarana izay horesahintsika amin'ity lahatsoratra ity ary azoko atao ny manolotra ireo izay te hanandrana ny Arch Linux nefa tsy mila manao ny fizotrany fametrahana nentin-drazana rehetra.
Ary raha fantatro koa fa maro no hiteny, satria i Manjaro, Arco Linux, sns, sns. Saingy tsara Tokony holazaiko fa mendrika andrana ny rafitra ity mba hahafahanao mahafantatra ny rafitra ary koa azonao atao ny mahita raha ho an'ny tontolo iainanao dia miorina tsara izy io miasa io.
Ny antony ilazako izany aminao, dia noho ny antony tsotra ihany no anaovan'ireo mpanamboatra azy io ny fanapariahana ho kinova "semi-stable" mba hiantsoana azy (na amin'ny fizahan-toetra raha mahazo aina ianao).
Amin'ny ankapobeny Laxer OS dia fizarana Linux marobe sy tsotra natao hamaly ny filan'ny mpampiasa Linux tsotra sy mahay. Mahery izy io, mora tantanana sy apetraka, fanaovana azy ho firafitra mety indrindra amin'ny toeram-piasana sy solosaina finday.
Nizara ity manaraka ity izy ireo tao amin'ny lahatsoratra:
Amin'ity kinova ity dia niezaka nanatsara ny rafitra fiasa ankapobeny izahay satria mifototra amin'ny Arch Linux dia sarotra be ny hahatratra ny fahamarinan-toerana amin'ny rafitra fiasa noho ny fanavaozana mitohy sy fanavaozana mitohy, fa amin'ny kinova farany Androany afaka manome toky anao izahay fa miorina tsara ny rafitray ary vonona ny ho lasa mpanara-maso anao isan'andro, na apetrakao amin'ny solosaina finday na birao ary na dia mampiasa UEFI firmware na grub aza ianao, dia manohana izahay roa.
Ity famotsorana ity dia ny famoahana voalohany ny Laxer OS, nesorinay ireo firafitra mahafinaritra maro ao anatin'ity famoahana ity toa ny "gnome layout switch" ary koa nanala ireo maro nokasaina halefa ny fanitarana gnome. Ny tena nifantohanay tamin'ity famotsorana ity dia ny hitondranao filaminana sy fianjerana. Rafitra fandidiana maimaimpoana ampiasaina isan'andro.
ankehitriny Laxer OS dia ao amin'ny kinova 1.0 miaraka amin'ny tontolon'ny birao GNOME ary mifantoka amin'ny fanaovana ny fametrahana, fikirakirana ary fiasa amin'ny rafitra mora araka izay tratra.
Ity kinova voalohany ity dia nifantoka indrindra tamin'ny fanomezana rafitra marin-toerana mety amin'ny fampiasana isan'andro, ankoatry ny drafitra ny fampiasa ilaina amin'ny ho avy, ohatra, kasaina ny manampy interface tsara hanovana haingana ny firafitry ny birao.
Mikasika ireo fepetra takiana ilaina Mba hametrahana sy hampandehanana ny rafitra amin'ny solosainao dia tsy maintsy manana ireto manaraka ireto farafaharatsiny:
64GZ 1-processeur kely
10 GB habaka kapila mafy.
Amin'ireto fepetra ireto dia tsy maintsy lazaiko fa hiasa kely ianao, saingy tolo-kevitra tena tsara izany hitantanana rafitra izay tsy mitaky loharano be loatra amin'ny voalohany ary azontsika atao ny manamboatra ny sisa amin'ny fitaovanay ho an'ny fampiharana sy lalao.
Mikasika ireo fepetra takiana:
30 GB habaka kapila mafy.
Amin'ny lafiny iray, raha ny momba ireo rindranasa azontsika jerena Firefox, LibreOffice, Flatpak, yay, ffmpeg, Gnome, GDM, hashcat, GIMP, Gparted, ankoatry ny hafa.
Sintomy ny Laxer OS
Raha liana ianao afaka manandrana na mametraka ity fizarana ity ho an'ny Linux dia azonao atao ny mahazo ny sarin'ny rafitra ao amin'ny fizarana fampidinana ao amin'ny tranokala ofisialiny na amin'ny alàlan'ny fandehanana mankamin'ity rohy manaraka ity.
Finalmente ho an'ireo izay te hahalala bebe kokoa momba izany momba ity fizarana Linux ity ary koa ny fitadiavana ny torolàlana fametrahana rafitra, afaka mahita fampahalalana bebe kokoa ao amin'ny tranonkalan'ny fizarana ianao. Ny rohy dia ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Laxer OS, Arch Linux misy Gnome izay tsy mitaky loharano sy bika tsara loatra
poizina dia hoy izy:
Toa mahaliana izany.
Inona no tiako kokoa amin'ny EndeavorOS na Reborn.
Valiny tamin'i Venom
RTAD dia hoy izy:
teraka tsara tarehy indray. Mandany loharano be dia be ve? ho an'ny ondrilahy 4gb dia mety izany raha ny fahitako azy. Hanandrana aho, misaotra-
Valio amin'i RTRAD
linuxman dia hoy izy:
Ny rohy mankany amin'ny fisintomana sy ny pejy ofisialin'ny tetikasa dia tapaka.
Valio ny LinuxMan
Tonga ny GeckoLinux 152 mifototra amin'ny openSUSE Leap 15.2 sy ireo fanovana ireo